यस्ता पनि बाबु आमा ! भारतवाट फर्किदा २८ दिनको शिशु जं’ग’ल मा फा’ले’र घर गए – Online Saptarangi
October 6, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on यस्ता पनि बाबु आमा ! भारतवाट फर्किदा २८ दिनको शिशु जं’ग’ल मा फा’ले’र घर गए
काठमाडौ । ज ङ्गुल मा फा’लि ए को शिशुको १२ घण्टापछि जी’वि तै उद्धार गरिएको छ । शारदा नगरपालिका –३ घोरलोटेका ज ङ्ग’ल मा फा’लि एको २८ दिने शिशुको आज बिहान उद्धार गरिएको हो ।
आइतबार साँझ ६ बजेतिर भारतको उत्तराखण्डबाट फर्केकी शारदा –३ की ३५ वर्षीया शान्ता परियारले अ वै ध स म्ब न्ध बाट जन्मेको शिशुलाई घर नपुग्दै ज ङ्ग ल मा छा डे र घर गएको प्रहरीले जनाएको छ । श्रीनगर बजारबाट बिहानै पैदल घुम्न निस्किएका स्थानीयवासीले ज ङ्ग ल मा च र्को स्वरमा शिशु रो’इ र हेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
प्रहरीले शिशुको उद्धार गरी सल्यान अस्पतालमा लिएर उपचार शुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । शिशु अस्पताल उपचार शुरु गरेलगत्तै प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान शुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मण वलीले जानकारी दिए । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा शिशुलाई ज ङ्ग’ल मा फा’ल्ने महिला र अ वै’ध स म्ब’न्ध राख्ने भनिएका शारदा – २ पानीखोलाका दानबहादुर भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
करीब एक वर्ष अगाडि कामका सिलसिलामा महिला भारतमा गएका बेला अ वै’ध स’म्ब न्ध रहेको र शिशु जन्मिएपछि घर फर्किने क्रममा अरुले थाहा पाउने ड र’ले ज ङ्ग’ल मा फा’ले र घर गएको भनी परियारले बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ । फाइल तस्बिर